Zvapupu zvaJehovha zvokuAsia neMiddle East
Israel: Kushandisa tablet pakuparidza nezveUmambo hwaMwari
VANOGARAMO 4 409 131 383
VAPARIDZI 718 716
ZVIDZIDZO ZVEBHAIBHERI 766 364
Maawa 100 Ekupemberera Makore 100
Mune imwe nyika yokuAsia mumwe mukadzi akakurumbira aiita zvokuekita mafirimu epaTV uye aishandiswa mumifananidzo nevaya vanoshambadza zvinhu, akabvuma kudzidza Bhaibheri. Akabva atotanga kushandisa zvaaidzidza achibva arasa mabhuku ake ezvemidzimu kubatanidzawo zvidhori zvake zvechiBuddha.
Imwe shamwari yake yakaedza kumunyengetedza ichiti, “Wadii kumbomira kudzidza kwemakore matatu chete, woisa pfungwa pabasa rako? Kana makore matatu apera, unogona kuenderera mberi nokudzidza kwako.”
Mukadzi wacho akapindura kuti: “Kweupenyu hwese ndagara ndichida kuziva Mwari. Ndingadireizve kuwedzera mamwe makore matatu kuti ndizotanga kudzidza nezvake?”
Muvhiki raaida kupa hurukuro yake yekutanga paChikoro chaMwari Choushumiri, akabva afonerwa neimwe kambani inoita zvemafirimu. Kambani yacho yakati vaigona kunyorerana chibvumirano chokuti vashande vose kwemakore mana vachimupa mari zhinji, asi chavaida ndechokuti azobvuma kuekita achiita chero zvavanenge vamuti aite. Akabva aramba. Muna May 2014, akagadzwa kuva muparidzi asina kubhabhatidzwa uye mwedzi waAugust wava kusvika, akasarudza kuti mumwedzi iwoyo aizoita maawa 100 achiparidza. Paakabvunzwa kuti nei aida kuita maawa 100, akati: “Jesu ava nemakore 100 achitonga, saka ndinoda kuitawo awa rimwe chete pagore rega rega rekutonga kwake!” Akakwanisa kuzadzisa chinangwa chake. Akabhabhatidzwa muna January 2015, uye iye zvino ari kushanda sapiyona webetsero.
Havana Kutambisa Mukana Pavakarara Mujeri
KuSri Lanka, dzimwe hanzvadzi ina dzakaenda nebhazi kunoparidza kune imwe ndima isina ungano, iyo yainge yakazara vanhu vechiBuddha. Pazuva rechipiri vari ikoko, mumwe mumonk * pamwe chete nemumwe mutyairi wetekisi vakamisa hanzvadzi dziya ndokutanga kudzifurufusha. Pasina nguva, vakanga vaunganirwa nevanhu vanenge 30 vainge vakatsamwa. Mapurisa akabva asvika ndokutora hanzvadzi dziya akaenda nadzo kukamba, ndokudzivharira muzvitokisi usiku hwose, kunyange zvazvo vakanga vasina mhosva yavaidzipomera. Vakaiswa muzvitokisi zvaiva nematsotsi emakoko, mavaitukwa uye maitaurwa zvinonyadzisira, asi vakabva vatoshandisa mukana wacho kuti vaparidze. Imwe yehanzvadzi dzacho yakati: “Ndakavharirwa pamwe chete nemhondi, asi ndakakwanisa kudzipupurira chokwadi. Zvakavashamisa kuti nei ndaiva mujeri uye vaiva nemibvunzo yakawanda pamusoro pezvandinotenda. Mumwe wavo akatondibvunza kuti, ‘Nei uri kufara?’”
Sri Lanka: Hanzvadzi ina dzakaenda nebhazi kunoparidzira kundima isina ungano
Dare Repamusorosoro reSri Lanka rakatambira chikumbiro chedu chokuti riongorore kusaremekedza kodzero dzevanhu kwakaitwa nemapurisa nokuvharira vanhu muchitokisi ivo vasina chavari kuvapomera. Nyaya yacho haisati yapinda mudare.
Kubatsira Mukadzi Asingakwanisi Kumuka Pamubhedha
Imwe hanzvadzi inopayona kuJapan inonzi Michiko, yaidzidza Bhaibheri nemumwe mukadzi akura pane chimwe chipatara, vachishandisa mutauro wemasaini. Michiko akabvunza vashandi vepo kana paiva nevamwe varwere vaaigona kutaura navo. Akabva aonana naKazumi, uyo ainzwa asi asingagoni kutaura. Kazumi akakuvara zvakaipisisa mutsaona yemotokari paaiva nemakore 23 uye akanga asingakwanisi kumedza chikafu kana kunwa mvura. Aiva nemibvunzo yakawanda uye akabvuma kudzidza Bhaibheri.
Japan: Kazumi anonakidzwa nekunyora tsamba dzinokurudzira
Michiko aibvunza mibvunzo, uye Kazumi aishandisa maoko ake kunongedzera pane mhinduro mundima, kana kuita zvokudzinyora pasi. Kazumi paakava nefoni, Michiko akanga ava kukwanisa kuita naye rugwaro rwezuva mangwanani oga oga. Kunyange zvazvo Kazumi akaremara kudaro, akaramba achikura pakunamata zvokuti akasvika pakutaura kuti aida kuva mumwe weZvapupu zvaJehovha. Akazova muparidzi asina kubhabhatidzwa ava nemakore 61 uye akanga aita makore 13 achidzidza.
Nemhaka yekuti Kazumi haakwanisi kusimuka pamubhedha, ungano yakaronga kuti ateerere misangano yose uye magungano pafoni. Mhinduro dzinenge dzagadzirirwa naKazumi dzinoverengwa nehanzvadzi dzakasiyana-siyana pamisangano.
Kazumi anonyora tsamba dzinokurudzira chaizvo, idzo dzinenge dzichienderana nemamiriro ezvinhu emudzidzi weBhaibheri mumwe nemumwe anouya kumisangano. Anoparidzira vanhu vanoshanda pachipatara nevaya vanouya kuzomuona. Kazumi anovaudza kuti, “Kana mukadzidza Bhaibheri, muchafara.”
Mumonk Anodzidza Chokwadi
Mune imwe nyika iri kuSoutheast Asia, imwe hanzvadzi yakaenda kwachiremba wemaziso kune chimwe chipatara kwayakaonana nemumwe mumonk. Hanzvadzi yacho yakamubvunza kuti, “Mungada here kuva neutano hwakanaka uye kurarama nekusingaperi munyika yakanaka?” Vakabva vatanga kukurukura zvakanakanaka, uye hanzvadzi yedu yakamupa bhurocha raTeerera Mwari. Murume wacho akapa hanzvadzi yacho nhamba dzake dzefoni, uye hanzvadzi yacho yakanopa imwe hama yemuungano mavo nhamba dzacho. Hama yacho yakabva yamufonera ndokumukoka kuti auye kuzonzwa hurukuro inokosha. Murume uyu akanakidzwa chaizvo nemusangano wacho, kunyanya pakaimbwa nziyo dzeUmambo, uye chakanyanya kumufadza ndechekuti munhu wese akamugamuchira zvakanaka.
Mumonk uya paakabvunza kuti Zvapupu zvine mayunivhesiti here kana kuti makoreji anodzidzisa vafundisi, hama yacho yakamutsanangurira kuti tinoitisa vanhu zvidzidzo zveBhaibheri uye yakabva yakumbira kudzidza naye. Vhiki rakatevera racho, murume uyu akanga atopedza kugadzirira chitsauko 1 chebhuku raBhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo? Akaenderera mberi nekudzidza, akatanga kupinda misangano, uye kupindurawo paChidzidzo cheNharireyomurindi.
Mumonk uyu paakapinda gungano redunhu, mumiririri wehofisi yebazi akamukoka kuBheteri. Vhiki rakatevera, murume uyu akaita rwendo rwemaawa gumi kuti asvike kuBheteri, uye akagamuchirwa zvakanaka. Pakapera February 2015, akabva asiya zveumonk uye ari kuramba achidzidza Bhaibheri nekupindurawo pamisangano yechiKristu.
Akanga Arasika, Asi Akazowanika
Munguva pfupi ichangopfuura, kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweIndia, uko kwakanga kwava nemakore akawanda kusati kwasvika mashoko akanaka, kwakatumirwa mapiyona. Mapiyona acho akawana vanhu vakawanda vaifarira, uye aida kutsvaga nzvimbo yekuitira misangano. Pavakanga vachienda kunoona munhu wavaidzidza naye Bhaibheri, vakaona imwe imba yakanga ichiri kuvakwa uye vakambofunga zvekunobvunza nezvayo. Vakamboti dzikei nemugwagwa, ndokubva vazofunga kudzoka kuti vabvunze. Vava kuseri kwemba yacho vakaonana nevamwe mbuya uye vakavaudza kuti vaiva Zvapupu zvaJehovha. Mbuya vacho vakashamisika uye vakafara chaizvo. “Neniwo ndiri mumwe weZvapupu zvaJehovha,” vakadaro uye vakavagamuchira mumba mavo nemufaro. Mbuya vacho vakavaratidza mabhuku akawanda avaiva navo ekuma1970 neekuma1980. Vakanga vadzidza nemamwe mapiyona makore 30 akanga adarika uye vakanga vambopinda misangano pasinei nekuti vaipikiswa nemurume wavo. Vaiva nechivimbo chekuti vakanga vawana chokwadi asi vakazenge vasisakwanisi kubatana nesangano nekuti mapiyona acho akanga abva munzvimbo yacho. Vana vavo vese vakatanga kupinda mamwe machechi, asi ivo vakaramba kuenda kumachechi acho.
India: Mbuya vanofarira vachiratidza mapiyona mabhuku avo akawanda ekuma1970 neekuma1980
Munguva shoma yapfuura, vana vavo vakatanga kuvamanikidza kuti vanyorese kuva nhengo yechechi yeRoma kuitira kuti vazowana anovachema kana vafa. Munin’ina wavo akatovatora kuti aende navo kuchechi kwacho kunonyoresa, asi pavakanga vachiri munzira, motokari dzakanga dzakawandisa mumugwagwa saka vakadzokera kumba. Munin’ina wavo akati vaizodzokerazve mangwana acho, asi akabva arwara. Masikati emusi iwoyo chaiwo, ndipo pakabva pasvikawo mapiyona pamba paambuya vaya! Iye zvino vava kudzidzazve Bhaibheri, kupinda misangano, uye vanokurudzira vana vavo nevazukuru vavo kuti vadzidzewo Bhaibheri.
^ ndima 4 Mumonk murume anenge akapikira kuita zvechitendero chake.